Mid ka mid ah su'aalaha ugu badan ee ganacsatada badani is weydiiyaan ayaa ah: "Waa maxay farsamada suuqgeynta ugu wax ku oolka badan ee ii heli doonta macaamiil badan?"
Nasiib darrose, su’aashan lagama jawaabi karo maadaama ay u qaadaneyso inay jirto farsamo ka dhigaysa qof aan weligiis maqlin meheraddaada inuu noqdo macmiil lacag bixinaya. "Waxaan jeclaan lahaa inay sahal tahay!"
Xitaa haddii aad ku bixiso kumanaan doolar wadista taraafikada tayada leh websaydhkaaga, booqdayaashani uma badna inay diyaar u yihiin inay iibsadaan badeecadaada ama adeeggaaga isla markiiba. Halkii aad ka raadin lahayd hal farsamo oo suuq ah oo soo jiidan doonta macaamiisha siintaada, waa inaad halkii aad ka fikiri lahayd sida suuqgeyntaada iyo dadaalka iibintaadu u wada shaqeyn karaan si aad rajadaada ugu dhigto wadada saxda ah. Musqusha iibka ama masafka iibku wuu dhammayn karaa tan.
Marka waa maxay Tunnelka Iibka ...
ClickFunnels: Kordhi iibkaaga adigoo adeegsanaya qalabka wax iibiya Janaayo 10th, 2021Tranquillus
READ Wareejinta qandaraasyada shaqada: qawaaniinta gudaha lagama fulin karo loo shaqeeyaha cusub
horeSida loogu guuleysto Daabacaadda dalabka ee 'RedBubble'